Mazano Kubva kuSemalt: Ungaita Sei Kuti Utsve Imeyiridzo Zvakakodzera?
Vanyengeri vari kuwedzera kushandisa sms emails kuti vabve kune vasina kufungidzirwa vanobatwa. Kunyange zvazvo maitiro avo mazhinji uye akawanda ari kuramba achinyatsobudiswa pachena, vanyengeri vanoita sevari nguva dzose kuva nhanho mberi, uye vanozoita chero chinhu kuti vanyengedze vanhu mumatambudziko avo. Somugumisiro, dzimwe nguva zvakaoma kusiyanisa email yekunyengedza kubva kune imwe yechokwadi. Asi pane zvimwe zvinhu zvinonyadzisa ma email zvakafanana.
Michael Brown, Muteresi Wakabudirira MuKatereji Semalt Dhidhiro Dhidhijita, anokupa kuti uongorore zviratidzo zvinotevera zvekunyora email:
Hauna kutanga chiito
Paunowana email inoratidza kuti wakakunda lottery kana kuti sangano rekushandira rakarongedzazve zvekare uye rakakupa basa, kune dambudziko - simple temperature monitors. Iwe hauna kutenga tikiti yekotori kana kushanda basa. Iwe unogona kuva nechokwadi chokuti muteereri wehuteereri isangwara.
Imeyili inokumbira kuti uwane ruzivo rwako
Iyi ndiyo nzira inowanzoshandiswa pakubiridzira vanoshandisa mashoko kubva kuvanhu. Dambudziko re email rinowanzoda kukumbira ruzivo rwusingabatsiri kune chinangwa chaanotumirwa. Nenzira yekutaura, sms email ine basa rinogona kukumbira zuva rako rokuberekwa uye nhoroondo yako yebhangi. Inogona kutowedzera mberi kukumbira humwe uchapupu hwehuzivi hwako, uye izvi zvinoreva kutumira kopi yeAID kana pasipu. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unofanirwa kumira uye kuzvibvunza: ndeipi kambani inoda izvi zvose izvi usati waisa chibvumirano chebasa?
URL ine chinyorwa chisingazivikanwi (domain)
Kuvhiringidza nguva dzose kunotarirwa nevashungurudzika vasina ruzivo pamusoro pezvakaipa. Muchiitiko ichi, vanotarisa vanhu vasingazivi kuti nzvimbo dzekuchengetedzwa kwemasayiti dzinodanwa sei. Maererano neDNS mazita ekugadzirisa, chikamu chekupedzisira cheimwe nzvimbo chinonyanya kuzivikanwa. A domain name name.paydayloans..com inogona kunge iri nzvimbo yevana ye paydayloans.com. Iri zita guru rezita rinowanikwa pamagumo ezita rezita remwana. Vanhu vanonyanya kufanana nemakambani echokwadi vachaita zita rezita rekubhadhara se paydayloans.com.scamdomain.com. Zita renzvimbo yakadai haingabvi kubva pa paydayloans.com nokuti paydayloans.com iri kuruboshwe rwakaitwa zita reimba.
shanduro yakaipa uye kusashandiswa kwemashoko makuru uye zviratidzo zvepumburu
Nyaya dzakawanda dzinonyanya kutumira mairi zvinyorwa zvinyorwa, kushandisa zvinyorwa uye zvisingabatsiri, zvine zvipereko zvepelenzi uye dzinowanzoshandisa mabhii makuru uye zvinyorwa zvisina kunaka. Dambudziko re email rakatumirwa kumumiri webasa rinogona kuedza kushandisa mazwi pedyo neshoko remabasa, asi hazvizoiti zvakajeka. Mharidzo yacho inogona kuve yakanyatsogadzirwa kana kuti isina chinangwa. Basa rekunyadzisa basa rinenge risingaiti sekunetseka neunyanzvi hwako. Vanogona kupa zvakawanda zvakawanda pamusoro pebasa asi zvishoma zvishoma nezvehutano hwakanaka hunotarisirwa kuti huve basa.
Imeyili inokumbira kuti utumire mari
Hazvina basa kuti mari yacho ndeyekufukidza chero ipi zvayo mari (mitero, mari, nezvimwewo). Yese imeiri iyo inokumbira mari inenge inenge yakaipa. Uye yeuka iwe unogona kunge usingawanike uchishandisa email yekutanga. Smart scammers vachaedza kukuita kuti uwedzere kuvimba navo pakutanga usati wakumbira mari. Usawa nekuda kwekunyengera. Pasinei nokuti vanokukumbira kuti utumire mari muyero yekutanga kana yegumi, ichiri chekuita.
Kana chimwe chinhu pamusoro pe email chinenge chisinganzwi zvakanaka, pane chiitiko chikuru chokuti hachisi chechokwadi. Kana iyo mvumo yeimeri yaunogamuchira ichiita seinovhiringidza neimwe nzira, zvingava zvakanaka kuti usatora chero chinhu chinotungamirirwa nemeyili uye nokukurumidza uone kutendeseka kwayo.